ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်က အိုမီခရွန်မျိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်တုံ့ပြန်ရေး “ အဆိုးဆုံးအတွက် ပြင်ဆင်ထားရန် ” သန္နိဌာန်ချထားဟု ဆို - Xinhua News Agency
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ in Roppongi ခရိုင်တွင် ခရစ်စမတ် နှင့် နှစ်သစ်ကူးကို ကြိုဆိုရန် မီးဆိုင်းမီးပန်းများ ထွန်းညှိထားသည်ကို ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက် ညပိုင်းက ရိုက်ကူးထားစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တိုကျို ၊ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ဖူမီယိုကစ်ရှီဒါ(Fumio Kishida) က နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးပြန်လည်နလံထူရေး မြှင့်တင်နေစဉ်အတွင်းမှာပင် COVID-19 ရောဂါ၏ အိုမီခရွန်မျိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်အားတုံ့ပြန်ခြင်းနှင့်အတူ “ အဆိုးဆုံး အနေအထားအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်” သန္နိဌာန်ချထားကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်တွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ နာရိတာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၏ စင်္ကြံအမှတ်(၁) မြင်ကွင်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
လွှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးတစ်ရပ်တွင် ၎င်း၏ မူဝါဒနှင့်ပတ်သက်၍ မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် ကီရှီဒါက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြန်လည်သုံးသပ်ရေး ဆွေးနွေးရန် မျှော်လင့်ကြောင်း နှင့် တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း လုံခြုံရေးမူဝါအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခု အပြီးသတ်ရန် ကတိပြုကြောင်းလည်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ၌ COVID-19 ကပ်ရောဂါအခြေအနေ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသော်လည်း “ နိုင်ငံအများအပြားမှာ အိုမီခရွန်မျိုးဗီဇကွဲဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပြန့်နှံ့လာခြင်းအပါအဝင် အန္တရာယ်သစ်များ” နှင့်ပတ်သက်၍ ကီရှီဒါက သတိပေးပြောကြားခဲ့သည်။
“ ကျွန်တော်တို့ဟာ သတိပြုမှု ၊ ဂရုပြုမှုနဲ့ ဆက်ပြီးနေထိုင်သွားရပါမယ်” ဟု ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပြီး နွေရာသီကတည်းက ကိုဗစ်-၁၉ လူနာများအတွက် ဆေးရုံ ကုတင် ၁၀,၀၀၀ ကို ဂျပန်နိုင်ငံက ထပ်မံဖြည့်ဆည်းခဲ့ကြောင်း နှင့် ယခုလနှောင်းပိုင်းမှစတင်ကာ ခံတွင်းကုသဆေးဝါးတစ်မျိုးကို အသုံးပြုရေး အတည်ပြုသွားဖွယ်ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံထားပြီးသူများအား ဒီဂျစ်တယ်လက်မှတ်များကို ဒီဇင်ဘာ ၂၀ တွင် ထုတ်ပေးနိုင်ရန် အစိုးရက အသင့်ရှိနေကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ အိုမီခရွန် မျိုးဗီဇကွဲဗိုင်းရပ်စ်စိုးရိမ်ပူပန်သည့်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံထဲသို့ နိုင်ငံခြားသားများ အသစ်ဝင်ရောက်မှုကို တားမြစ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်အား ရည်ညွှန်းလျက် ကီရှီဒါက “ ဝေဖန်မှုကို လက်ခံဖို့အသင့်ပါပဲ ၊ အခြေအနေကို ကောင်းစွာမထိန်းချုပ်နိုင်ခင်မှာ ကျွန်တော်ကတော့ လုံးဝ သတိထားပြီး လုပ်ကိုင်သွားမှာပဲ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
သို့သော်လည်း ဝန်ကြီးချုပ်က ကပ်ရောဂါကြောင့် သက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်နလံထူရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် အလုပ်သမားများအား ထောက်ပံ့မှုပြုလုပ်သွားရေးအတွက် ကျင်းပဆဲ လွှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးအတွင်း ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နောက်ဆက်တွဲ ဖြည့်စွက်ဘက်ဂျက်ငွေ ဂျပန်ယန်း ၃၆ ထရီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၁၉ ဘီလီယံ) ကို အတည်ပြုခြင်းနှင့်အတူ အများစုအား ရံပုံငွေထောက်ပံ့သွားရန် ကတိပြုပြောကြားခဲ့သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကီရှီဒါက တရားလွှတ်တော်ချုပ်က ပြင်ဆင်သည်ဖြစ်စေ မပြင်ဆင်သည်ဖြစ်စေ လွှတ်တော်အမတ်များအနေဖြင့် “ အလေးအနက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
“ ပြောင်းလဲမှုတွေ လျင်လျင်မြန်မြန်ဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာ ဒီကနေ့အတွက် လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်သင့်မသင့် ပြည်သူတွေအကြား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးနိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်” ဟု ၎င်း ကဆိုသည်။
“ အရင်းရှင်စနစ်သစ်” အောင်မြင်ရေး ၎င်း၏ ကတိကဝတ်ကို တုံ့ပြန်ရာတွင် ကီရှီဒါက အစိုးရအနေဖြင့် အခွန်ဝင်ငွေမြှင့်တင်ရန်အတွက် အခွန်စည်းကြပ်မှုတိုးမြှင့်ရေးကို မလွှဲမရှောင်သာ လုပ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ယင်းမှာ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးကို မြှင့်တင်ပေးရုံမျှသာမက လူလတ်တန်းစားများအတွက် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကို ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းလည်းဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်အတွက် “ အမြန်လမ်းကြောင်း” တစ်ခုကို ဖော်ဆော်ရန် သူ့အစိုးရအနေဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် မြေအောက် အင်တာနက်ကြိုးလိုင်းများကို မြှုပ်နှံတပ်ဆင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အထူးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးကို ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် စတင်ခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်အထိ ဆက်လက် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
Japan PM vows to “prepare for worst” for Omicron variant
TOKYO, Dec.7(Xinhua) — Japanese Prime Minister Fumio Kishida on Monday vowed to “prepare for the worst” in dealing with the Omicron variant of the COVID-19 while still promoting the economic recovery of the country.
Although the COVID-19 situation in Japan has significantly improved, Kishida warned of “new risks including the confirmation of the Omicron variant acrossanumber of countries.”
“We will maintain our stance of being cautious and prudent,” the prime minister said, adding Japan has added 10,000 hospital beds for COVID-19 patients since the summer and would possibly approve the use of an oral treatment drug later this month.
Referring toadecision to ban new entries of foreigners into Japan due to concerns over the Omicron variant, Kishida said he is “ready to accept criticism that I’m being too cautious before we have an adequate grasp of the situation.”
Regarding the constitutional reform, Kishida emphasized that lawmakers “havearesponsibility to seriously consider” whether or not to amend the supreme law.
Kishida said the government would “drastically” increase tax incentives for firms to raise wages in response to his promise of achieving his “new capitalism”, which not only sparks growth in the Japanese economy but also redistributes wealth to the middle class.
In order to promote digital technology, he said his government would lay underwater cables around Japan to forma“superhighway” for high-speed internet.
(1)Photo taken on Dec. 4, 2021 shows the night view ofastreet decorated with lights for Christmas and New Year in Roppongi District of Tokyo, Japan. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)
(2) Photo taken on Nov. 30, 2021 shows the international arrivals of Narita airport Terminal 1 in Tokyo, Japan. (Xinhua/Zhang Xiaoyu)